येशू मा आराम खोज्नुहोस् - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
मिडिया > जर्नल फोकस फोकस > पत्रिका फोकस यीशु 2018-02 > येशूलाई शान्ति खोज्नुहोस्
दस आज्ञाहरु पढ्छन्: "विश्राम दिनलाई पवित्र राख्नको लागी सम्झनुहोस्। तपाइँ छ दिन काम गरीरहनु पर्छ र तपाइँका सबै कामहरु गर्नु पर्छ। तर सातौं दिन परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको विश्राम दिन हो। तपाइँ त्यहाँ कुनै काम गर्नुहुन्न, न त तिम्रो छोरा, न तेरी छोरी, तिम्रो नोकर, तिम्रो दासी, तिम्रो गाईवस्तु, तिम्रो शहरमा बस्ने अपरिचित पनि छैन। किनकि छ दिनमा प्रभुले स्वर्ग र पृथ्वी, समुद्र र ती सबै जो उनीहरुमा हुनुहुन्छ बनाउनुभयो, र सातौं दिनमा आराम गर्नुभयो। यसैले प्रभुले विश्राम दिनलाई आशीर्वाद दिनुभयो र यसलाई पवित्र बनाउनुभयो (प्रस्थान २०: -2-११)। के यो मुक्ति प्राप्त गर्न विश्राम दिन राख्न आवश्यक छ? वा: it यो आइतबार राख्न आवश्यक छ? मेरो जवाफ छ: "तपाइँको मुक्ति एक दिन मा निर्भर गर्दैन, तर एक व्यक्ति, अर्थात् येशू" मा निर्भर गर्दछ!
मैले हालसालै संयुक्त राज्यमा एक जना साथीलाई फोन गरें। उनी बहालिएको चर्च अफ गॉडमा गए। यस चर्चले हर्बर्ट डब्ल्यू। आर्मस्ट्रstrongको शिक्षाको पुनर्स्थापनाको बारेमा सिकाउँदछ। उसले मलाई सोध्यो: "के तपाईंले शबाथ पालन गर्दै हुनुहुन्छ?" मैले उनलाई जवाफ दिएँ: "नयाँ करारमा मुक्ति पाउन शबाथ आवश्यक छैन"!
मैले यस बयान पहिलो चोटि २० बर्ष पहिले सुनेको थिएँ र वास्तवमा मैले त्यसबेला वाक्यको अर्थ बुझेन किनकि म अझै कानूनको अधीनमा थिएँ। कानूनको अधीनमा बस्न कस्तो लाग्छ भनेर बुझ्नको लागि म तपाईंलाई एक व्यक्तिगत कथा बताउनेछु।
जब म बच्चा थिएँ, मैले मेरी आमालाई सोधें: "तपाईं मातृ दिवसको लागि के चाहनुहुन्छ?" "म खुसी छु यदि तपाईं एक प्यारी बच्चा हुनुहुन्छ," मैले उत्तरको रूपमा प्राप्त गरें! को हो वा मायालु बच्चा के हो? "यदि तपाईले मैले भनेको कुरा गरेमा।" मेरो निष्कर्ष थियो: I यदि मैले मेरी आमाको विरोध गर्दछु भने, म खराब बच्चा हुँ।
WKG मा मलाई परमेश्वरको सिद्धान्त थाहा भयो। जब म भगवानले भनेको कुरा गर्छु म एउटा प्यारो बच्चा हुँ। उहाँ भन्नुहुन्छ: "तपाईंले विश्राम दिनलाई पवित्र राख्नुपर्छ, तब तपाईं धन्य हुनुहुनेछ"! कुनै समस्या छैन, मैले सोचे, म सिद्धान्त बुझ्दछु! एक जवान व्यक्ति को रूप मा म एक बिसौनी खोजिरहेको थियो। सब्बाथमा समात्दा मलाई स्थिरता र सुरक्षा दिइयो। यस तरिकाले, म स्पष्ट रूपमा एक प्यारा बच्चा थिए। आज म आफैलाई प्रश्न सोध्छु: I मलाई यो सुरक्षा चाहिन्छ? के यो मेरो मुक्तिको लागि आवश्यक छ? मेरो मुक्ति येशूमा पूर्ण रूपमा निर्भर गर्दछ! »
मुक्तिको लागि के आवश्यक छ?
परमेश्वरले छ दिनमा सारा ब्रह्माण्ड सृष्टि गरेपछि, उहाँ सातौं दिनमा विश्राम गर्नुभयो। आदम र हव्वा छोटो समयको लागि यस शान्तमा बाँचिरहे। पापबाट तिनीहरूको पतनले तिनीहरूलाई श्रापमा ल्यायो किनभने भविष्यमा आदमले आफ्नो अनुहारको पसिनाको रोटी खानुपर्‍यो र हव्वाले बच्चा जन्माउँछिन् र उनीहरूको मृत्यु नहोउन्जेलसम्म श्रम गरे।
पछि परमेश्वरले इस्राएलका मानिसहरूसँग एउटा सम्झौता गर्नुभयो। यो करार अनुरोध काम गर्दछ। तिनीहरूले व्यवस्था पालन गर्नुपर्दथ्यो धार्मिक, न्यायी, आशिष्‌, र श्राप हुनु हुँदैन। पुरानो करारमा, इस्राएलका मानिसहरूले न्यायका धार्मिक कामहरू गर्नुपर्‍यो। छ दिनको लागि, हप्ता हप्ता पछि। तिनीहरूलाई हप्ताको एक दिन, विश्राम दिन मात्र आराम गर्ने अनुमति दिइयो। यो दिन अनुग्रहको प्रतिबिम्ब थियो। नयाँ करार को एक foretaste।
जब येशू पृथ्वीमा आउनुभयो उहाँ यस कानूनी करार अन्तर्गत बस्नुहुन्थ्यो, जस्तै यो लेखिएको छ: "जब समय पूरा भयो, भगवानले आफ्नो पुत्र पठाउनुभयो, एक महिलाबाट जन्मेको र कानून अन्तर्गत" (गलाती ४: ४)।
सृष्टिको कामको छ दिनले परमेश्वरको व्यवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो उत्तम र सुन्दर छ। यसले ईश्वरको निर्दोष र ईश्वरीय न्यायको गवाही दिन्छ। यो यति महत्त्वपूर्ण छ कि केवल येशू आफैले यो पूरा गर्न सक्नुहुन्छ।
येशूले तपाईंको लागि व्यवस्था पूरा गर्नुभयो जुन आवश्यक थियो। उसले सबै ठाउँमा तपाईंको व्यवस्था राख्यो। उहाँ क्रूसमा झुण्डनुभयो र तपाईंको पापको लागि दण्डित हुनुभयो। मूल्य तिर्ने बित्तिकै, येशूले भन्नुभयो: "यो सकियो"! तब उ शिर झुकाए र मरे।
येशूमा तपाइँको सबै भरोसा राख्नुहोस् र तपाइँ सदाको लागी शान्ति पाउनुहुनेछ किनकि तपाइँ येशू ख्रीष्टको माध्यमबाट परमेश्वरको सामु धर्मी ठहरिनुभयो। तपाइँ तपाइँको मुक्ति को लागी संघर्ष गर्नु पर्दैन, तपाइँको debtण को मूल्य तिरेको छ। पुरा तरिकाले! «किनकि जो कोही आफ्नो विश्राममा प्रवेश गरेको छ, उहाँ पनि उहाँको कामबाट विश्राम लिनुहुन्छ जसरी परमेश्वर उहाँबाट आराम गर्नुहुन्छ। तेसैले अब हामी यो विश्राम मा प्रवेश गर्ने कोसिस गरौं ताकि कोहि अनाज्ञाकारिता (अविश्वास) को यो उदाहरण मा नपरोस् "(हिब्रू ४: १०-११, नयाँ जेनेभा अनुवाद)।
जब तपाईं बाँकी परमेश्वरको धार्मिकतामा प्रवेश गर्नुहुन्छ, तपाईंले आफ्नो काम धार्मिकताले गर्नु पर्छ। अब केवल एउटा काम तपाईंबाट आशा गरिन्छ: "शान्तिमा जान"! म फेरि भन्छु, तपाईं केवल येशूमा विश्वास गरेर यो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं कसरी झर्नुहुनेछ र अनाज्ञाकारी बन्नुहुनेछ? आफैले आफैंको न्याय गर्न चाहेको। त्यो अविश्वास हो।
यदि तपाईं पर्याप्त राम्रो वा अयोग्य नभएको जस्तो भावनाबाट पीडित हुनुहुन्छ भने, यो यो संकेत हो कि तपाईं अझै येशूको शान्तिमा हुनुहुन्न। यो बारम्बार माफी माग्नु र भगवानलाई सबै प्रकारका प्रतिज्ञाहरू गर्नु भनेको होइन। यो येशूमा तपाईंको दृढ विश्वासको बारेमा हो जुन तपाईंलाई आराममा फर्काउँदछ! तपाईं येशूको सबै बलिदान को लागि तपाईं दोषी थिए किनभने तपाईं उहाँलाई यो स्वीकार गर्नुभयो। यसैले तपाईं परमेश्वर समक्ष सफा हुनुहुन्छ, पूर्ण, पवित्र र निष्पक्ष हुनुहुन्छ। यसको लागि तपाईंले येशूलाई धन्यवाद दिनु पर्दछ।
नयाँ करार शबाथ आराम हो!
गलातीहरूले विश्वास गरे कि अनुग्रहले उनीहरूलाई परमेश्वरमा पहुँच पुर्‍यायो। उनीहरूले सोचे कि अब परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु र धर्मशास्त्रका आज्ञाहरू पालन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। खतना, भोज दिनहरू र शबाथ दिनहरू, पुरानो करारको आदेशहरू बारे स्पष्ट आदेशहरू।
इसाईहरूले पुरानो र नयाँ करार दुवै राख्नुपर्दछ भनेर गलातीहरूले झूटा शिक्षा बोकेका थिए। तिनीहरूले भने: "आज्ञाकारिता र अनुग्रहको माध्यमबाट योग्यता" आवश्यक छ। तिनीहरूले गल्तीले विश्वास गरे।
हामी पढ्दछौं कि येशू कानून अन्तर्गत बस्नुहुन्थ्यो। जब येशू मर्नुभयो, उहाँ यस कानून अन्तर्गत बाँच्न बन्द गर्नुभयो। ख्रीष्टको मृत्युले पुरानो करार, कानून करार समाप्त भयो। "किनकि ख्रीष्ट व्यवस्थाको अन्त्य हुनुहुन्छ" (रोमी १०: ४)। आउनुहोस् पलले गलातीहरुलाई के भनेका छन् पढौं: "वास्तवमा, तथापि, मँ कानून संग अरु केहि गर्न को लागी छैन; मँ कानून को विरुद्ध कानून को फैसला द्वारा मरेको छु, अब बाट भगवान को लागी बाँच्न को लागी; म ख्रीष्ट संग क्रूसमा टाँगिएको छु। म बाँचें, तर अब म होइन, तर ख्रीष्ट ममा बस्नुहुन्छ। म अब शरीर मा बाँच्न को लागी, म भगवान को पुत्र मा विश्वास मा बस्छु, जसले मलाई माया गर्नुभयो र मेरो लागी आफुलाई त्याग्नुभयो "(गलाती २: १ -10,4 -२०, नयाँ जेनेभा अनुवाद)।
कानून को निर्णय द्वारा, तपाइँ येशू संग मर्नुभयो र अब पुरानो करार अन्तर्गत बाँच्न। तपाइँ येशू संग क्रूसमा टाँगिनुभयो र नयाँ जीवनको लागी उठ्नुभयो। अब तपाइँ नयाँ करार मा येशू संग आराम। भगवान तपाइँ संग काम गर्नुहुन्छ र उसले तपाइँलाई यो गुण दिन्छ किनकि उसले तपाइँको माध्यम बाट सबै गर्छ। यस तरीकाले तपाइँ येशूको आराम मा बस्नुहुन्छ। काम येशू द्वारा गरीएको छ! नयाँ करारमा उनीहरुको काम यो विश्वास गर्नु हो: "यो भगवानको काम हो कि तपाइँ उसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ जसलाई उसले पठाएको छ" (यूहन्ना:: २)।
येशूमा नयाँ जीवन
येशूमा नयाँ करारमा शान्त हुनु भनेको के हो? तपाइँ अब केहि गर्न छैन? तपाईले जस्तो गर्न सक्नुहुन्छ? हो, तपाईं आफ्नो मर्जी अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ! तपाईं आइतबार र विश्राम छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। तिमीले विश्राम दिनलाई पवित्र राख्न सक्छौ र छैन। तपाईंको व्यवहारले तपाईंको लागि उसको प्रेमलाई असर गर्दैन। येशूले तपाईंलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा दिमाग र आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर्नुहुन्छ।
भगवानले मलाई मेरो पाप बाट सबै फोहोर संग स्वीकार गर्नुभयो। मैले त्यसलाई कसरी प्रतिक्रिया दिनुपर्छ? के म सुँगुर जस्तै माटो मा हिड्नु पर्छ? पावल सोध्छन्: “अब कसरी? के हामी पाप गर्छौं किनकि हामी कानूनको अधीनमा छैनौं तर अनुग्रहको अधीनमा छौं? टाढा होस् »(रोमी ::१५)! जवाफ स्पष्ट छ, कहिल्यै! नयाँ जीवन मा एक ख्रीष्ट मा, म प्रेम को कानून मा बस्छु, जसरी भगवान प्रेम को कानून मा बस्नुहुन्छ।
Love हामीलाई माया गरौं, किनकि उहाँले हामीलाई पहिले माया गर्नुभयो। यदि कसैले भन्छ: म भगवानलाई माया गर्छु र उसको भाइलाई घृणा गर्छु, ऊ झुटो हो। किनकि जसले आफ्नो भाइलाई माया गर्दैन जसलाई उसले देख्दछ उसले भगवानलाई माया गर्न सक्दैन जसलाई उसले देख्दैन। र हामी उहाँबाट यो आज्ञा पाएका छौं कि जो कोहि परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछ उसले आफ्नो भाइलाई माया गर "(१ यूहन्ना ४: १ -1 -२१)।
तपाईंले परमेश्वरको अनुग्रह अनुभव गर्नुभएको छ। तपाईंले आफ्नो दोष क्षमा गर्नुभयो र येशूको प्रायश्चितको बलिदानको माध्यमले परमेश्वरसँग मिलाप गर्नुभयो। तपाईं भगवानको एक अपनाइएको बच्चा र उहाँको राज्यको हकदार हुनुहुन्छ। येशूले यसको रगतले यसको लागि भुक्तान गर्नुभयो र तपाईं केहि गर्न सक्नुहुन्न किनभने सबै कुरा गरिएको छ जुन तपाईंको मुक्तिको लागि आवश्यक छ। येशू मार्फत सही तरिकाले काम गर्न दिएर ख्रीष्टमा प्रेमको व्यवस्था पूरा गर्नुहोस्। येशूको प्रेम तपाईंको साथीलाई प्रवाह गरौं जसरी येशू तपाईंलाई प्रेम गर्नुहुन्छ।
यदि कसैले आज मलाई सोधे: "के तपाईंले शबाथ पालन गर्दै हुनुहुन्छ", म जवाफ दिन्छु: "येशू मेरो शबाथ हुनुहुन्छ"! उहाँ मेरो शान्त हुनुहुन्छ। म येशूमा मेरो मुक्ति छ। तपाईं पनि येशूमा आफ्नो मुक्ति पाउन सक्नुहुन्छ!